Akwụkwọ ikike ikike Cannabis maka onyinye Cannabis Edibles & Mmanya
Akwụkwọ ikike Infuser maka akwụkwọ Cannabis na Illinois
Kedu ihe iwu ahụ kwuru gbasara ndị otu Infuser maka Cannabis extracts na Illinois?
An Akwụkwọ ikike ikike bu ihe owuwu nke na-etinyeko akoba abuo n’ime ngwa ahia iji mee ka ogwu akuko kporo ogwu. Ngalaba Ugbo ga-enwe ikike na ngalaba ndị a, ọ ga-egboro ha mkpa ole na ole ka ha wee nweta akwụkwọ ikike.
Mgbakwunye Ọgwụ Cannabis Mgbe ụfọdụ Nwere Ike Weghachi Mmanụ a .ụ
N’okpuru, anyị leba anya n’ụfọdụ n’ime ihe ndị ahụ a chọrọ. Anyị ga-ekpuchikwa usoro iwu enyere maka ndị na-achọ ịtọlite ​​ikike ikikere maka ndị otu cannabis.
Ntinye akwụkwọ ikike nke Cannabis Infuser
Na mbido July 2020, ngalaba ọrụ ubi ewepụtala akwụkwọ ikikere izizi 40 maka nzukọ. Ngwa maka ikikere ndị a ga-amalite site na Jenụwarị 7, 2020 na windo ngwa ahụ ga-emechi tupu Machị 15, 2020.
Ka ọ na-erule njedebe afọ 2021, ngalaba ọrụ ugbo ewepụtala ikikere izizi ọgbakọ dị iri isii. Tupu ụbọchị a, ngalaba ahụ nwere ike ịnwe iwu ga-agbanwe nọmba a.
Stepsfọdụ usoro ngalaba ahụ nwere ike ịme iji bulite ọnụ ọgụgụ ndị na-achọ akwụkwọ ikike inweta gụnyere gụnyere, "Ịgbanwe ma ọ bụ bulie ọnụ ọgụgụ ikike ikikere ihe ma gbanwee ma ọ bụ gbanwee usoro ikikere ikikere iji belata ma ọ bụ wepu ihe mgbochi."
Ihe ole na ole nke Ngalaba Ọrụ Ugbo ga-atụle ka ha na-abawanye ma ọ bụ na-ebelata ọnụ ọgụgụ akwụkwọ ikike ndị gụnyere gụnyere:
Enwere ngwaahịa cannabis ezughị ezu ma ọ bụ ngwaahịa ndị a na-enye cannabis iji gboo mkpa nke ndị ọrịa cannabis ọgwụ.
Nweta ngwaahịa ndị a na-enweta cannabis enweghị ike igbo mkpa nke ma ndị ọrụ ahụike ma ndị ntụrụndụ
Oghere nwere ike itinyekwu ọgbakọ ndị ọzọ ma ọ bụ ịmalite ọgbakọ ndị a na mpaghara ụfọdụ
Enweghị nchedo nke edere na ndi otu niile enyere aka
Mgbanwe na iwu gọọmentị etiti chọrọ mgbakwunye ma ọ bụ mbelata nke ndị otu
Ngalaba oru ubi enweghi ike ime ihe ndi ozo di iche.
A ga-eme akwụkwọ anamachọihe maka akwụkwọ ikike ihe ngwa ọrụ na kọmputa. Mgbe ị na-etinye akwụkwọ anamachọihe a, achọrọ ihe ndị a:
Ntinye ego ntughari. Ruo Jenụwarị 2021, ego a ga-abụ $ 5,000. Mgbe ụbọchị a gasịrị, ngalaba ọrụ ọrụ ugbo nwere ike itinye ego ọzọ dị elu ma ọ bụ nke dị ala. A ga-edebe ego a na ụgwọ nchịkwa cannabis
Aha iwu nke nwa amadị ahụ, adres a na-ahụ maka ya, yana aha na ndị isi niile na ndị isi ọrụ
Nkwupụta zuru oke na, “nkọwapụta nke usoro nchịkwa ma ọ bụ nke ikpe na nke ọ bụla nke ndị isi ma ọ bụ ndị otu ndị isi nke ihe infuser
(i) ekwere na ikpe mara ya, maa ya ikpe, taa ya ụtarị, ma ọ bụ nwee ikike ịtụpụrụ ma ọ bụ ikike iwepụ ya, ma ọ bụ
(ii) jisiri ma ọ bụ jee ozi na bọọdụ azụmaahịa ma ọ bụ nke na-eriteghị uru nke na-ekwupụta na ikpe mara ya, ama ya ikpe, taa ya ụtarị, ma ọ bụ kwụsịtụrụ aha ya ma ọ bụ ikike ịtụpụrụ ma ọ bụ kagbuo ”
Iwu nke onye ihe achọrọ ga-erubere ya gụnyere sistemụ nlekota, atụmatụ nchekwa yana atụmatụ nke ndị ọrụ
Ahụmịhe dị na ụlọ ọrụ cannabis, yana nkọwa nke na-akọwapụta ndị na-achọ akwụkwọ ahụjula anya na ha na-arụ ọrụ na kichin azụmaahịa ma ọ bụ n'ụlọ nyocha ebe a na-emepụta ngwaahịa ndị ezubere maka oriri mmadụ.
Atụmatụ zuru ezu banyere etu onye ahụ na-amị amị ga-esi nweta ike ume ya, mkpa mmiri, na njikwa mkpofu
Ihe ndị mere eji eme ka mmadụ ghara inweta ya
Ngalaba oru ubi nwere ike imebi ngwa oru ndi agha abughi ndi a.
Onye na-arịọ arịrịọ enyebeghị ozi niile achọrọ. Mgbe ụfọdụ, “Ọ bụrụ na Ngalaba Ọrụ Ugbo enweta ọrụ na ozi na-efu, Ngalaba Ọrụ Ugbo nwere ike ịgwa onye chọrọ ya akwụkwọ mkpesa na-ezighi ezi. Onye na-etinye akwụkwọ ga-enwe ụbọchị iri kalenda iri site na ụbọchị ngosi nke erughi iji nyefee ihe ọmụma ezughi ezu. ”
Ọ bụrụ na onye anamachọija ewetaghị ihe omuma zuru ezu ọbụlagodi mgbe amachara ọkwa a, a ga-ewepụrịrị ngwa ahụ.
Olee otu a ga-esi nye Akwụkwọ ikike Cannabis
A ga-achọrọ ngalaba ọrụ ubi ka ọ bịa na usoro nke ga-achọpụta ihe ndị sitere na ndị na-achọ ụlọ ọrụ nwere mmasị. A ga-enye ndị na-akara isi ihe dị elu onyinye mbụ ikike ikikere nzukọ. Asambodo a ga-esite na ozi onye na-ahụ maka ọrụ na-enye ihe, nhazi otu yana idoanya ngwa.
Ihe ndị ọzọ a ga-atụle gụnyere:
Odika ihe ndoro ahu kwesiri ekwesi
Atụmatụ ọzụzụ ndị ọrụ dịịrị
Idebe ndekọ na atụmatụ nchekwa
Ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Atụmatụ gburugburu ebe obibi
Ndi otu ndi n’egoro ndi nasi n’otu n’enye ndi ozo, ha gha enweta onyinye ndi ozo. Inftù na-erughi ihe pụrụ igosipụta ọchịchọ ha itinye aka na obodo site na, "isonye n'otu ma ọ bụ karịa, mana ọnweghị oke na omume ndị a:
(i) nguzobe ihe ndozi nke achoro iji bulite ntinye aka na ulo oru cannabis site n'aka ndi mmadu gha etozu dika ndi ntinye akwukwo nke ndi otu;
(ii) inye aka ego nye aka n’ulo ebe a na-a abuse di aru aru;
(iii) childrenmuta ụmụaka na umuaka banyere ihe ọghọm ha nwere ike ị useụ cannabis; ma obu
(iv) ihe ndi ozo na egosiputa obodo ikwenye ya ”.
Enwere ike Gbanwere Ikikere?
Eeh, ngalaba ọrụ ugbo ga-enwe ikike ịgọnarị akwụkwọ anamachọihe ma ọ bụrụ na ha chee na onye ahụ na-achọ akwụkwọ anaghị agbaso usoro ekwenye na ihe achọrọ. Enwere ike ịgọnye akwụkwọ ikikere ma ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a esote:
A naghị edobe ihe niile achọrọ
Ọ bụrụ na onye tinye akwụkwọ anaghị agbaso iwu mpaghara
Ọ bụrụ n’otu n’ime ndị isi bọọdụ na ndị isi ala erughị afọ 21
Nkwenye nkwenye mbụ nke ndị chọrọ ikikere ikike maka ogo mmadụ
Cannabis Infuser Organisation Ntinye Ngwa
Ihe ufodu choro ndi otu di iche-iche kwesiri ka ha gunye:
Akwụkwọ ọrụ zuru oke nke na-akọwa usoro nhazi, usoro nleba anya, idekọ ndekọ na atụmatụ mkpara
Ndị uwe ojii ga-enyocha atụmatụ nchekwa nke ngwa ọrụ infuser
A ga-eme nhazi nke ngwaahịa ndị a na-enweta cannabis n'ebe zoro ezo. Aga-egbochikwa ohere ịbanye na mpaghara a dị ka akọwara n'iwu.
A ga-ekenye ndị na-emepụta Cannabis ndị a na-ekesa maka ọgbakọ na-ekesa akwụkwọ
A machibidoro nzukọ nke infuser ikewapụ ọnụahịa ahụ mgbe ịrere ndị otu dị iche iche na-ekesara ya. Ngwaahịa niile nke ụlọ ọrụ infuser chọrọ ka ọ bụrụ nke dị oke mma ma dị ọnụ ala maka ndị azụtara niile.
Echiche nke ikpeazụ na ikike ikike ikike afọ
Ihe ndị a dị n'elu bụ ụfọdụ n'ime ihe iwu chọrọ maka ndị chọrọ iguzobe nzukọ dị iche iche. A ga-enwekwu ihe achọrọ dị ka a tụrụ anya na ihe ga na-agbanwe. Ndị nwere mmasị isonye na ụlọ ọrụ a ga-akpachara anya banyere ihe na-eme.
Iji nwee ihe ịga nke ọma, ị ga-akpọtụrụ a ọka iwu cannabis onye nwere ike inyere gị aka ịghọta ihe niile achọrọ iji tinye akwụkwọ ikike. Ha ga-ahụ na ngwa gị gafere na nke izizi. N'inye onye ọka iwu, ọ ga-adịkwa mfe ịga n'ihu na-arụ ọrụ na irube isi n'iwu.
Akwụkwọ ikike infuser - otu ị ga - enweta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme brownies maka uru na Illinois.
Ehee, a bụ m - achọta m site na iwegharị ọka iwu cannabis ma gaa na ngalaba ọka iwu cannabis webụsaịtị m ka m jụọ ajụjụ ọ bụla otu gị nwere. Na ikikere infuser - isiokwu taa - Illinois emeela ihe dịtụ iche karịa ikikere processor na mpaghara ọdịda anyanwụ - anyị ga-amaba miri na nke a, yabụ m ga-agwa gị otu esi enweta ọrụ mmịpụta ahụ enwere ike ị gbagwojuru anya banyere ọ na-abịa ikikere infuser.
Ya mere denye aha, juo ajuju na nzaghachi, ma nye anyi isi aka ma nwee olile anya ihu gi ka Wednesde na akuko nke Legalization - ugbua, ka anyi tinye n’ime ikike ikike nke infuser.
Ngalaba Illinois nke ag ga-enye akwụkwọ ikike ikikere 40 na July nke 2020, na 60 ọzọ ka ọ ga-abụ na Disemba 2021. Anyị amabeghị ọtụtụ ikikere ga-abịa mgbe 2022 gasịrị - mana ọ dị ka enweghị njedebe site na iwu nke ngalaba ngalaba gbanwere. nke ahụ. Ọ ga-adabere na ịnye ngwaahịa ndị dị otú ahụ enyefewo nke zuru oke - nke m chere na anyị ga-echere ma hụ otu ndị na-azụ ahịa si debe nke ahụ. You ga-azụta.
Achịcha Ohere? Kacha brownies? Kemmiri a na-enye, candies siri ike - ma ọ bụ ọkọlọtọ ọla edo maka m… Lagunitas THC-brau new. HiFi hops - ugbu a na California, Colorado - ma eleghị anya site na 2021 - Illinois dịka ị maara Lagunitas nwere ụlọ ịsa ahụ na mpaghara Chicagoland.
Of note - infuser ikike bu nke kacha ọnụ ma a bịa na ego ikike ikikere nke steeti nyere ya. Ọ bụ nnukwu nna 5 itinye akwụkwọ, emesia 5 iji merie - mgbe nke ahụ ga - akwụ ụgwọ $ 20,000 kwa afọ mgbe nke a gasịrị.
Ngwa a ga-apụta na Jenụwarị nke 2020, na-atụ anya na anyị ga-enweta iwu ndị ọzọ - mana anyị na-ahụ ihe ndị bụ isi na ngwa ahụ n'onwe ya.
Ọ bụghị na ihe dị iche na ndị ọzọ akwụkwọ ikike cannabis. Ikwesiri ime ka igosipụta ya na otutu atụmatụ ya banyere otu ụlọ ọrụ ahụ ga-esi rụọ ọrụ, dobe ndekọ, atụmatụ ndị ọrụ, atụmatụ nchekwa na nlegide anya. Ga-ekpughere usoro nchịkwa ma ọ bụ nke ikpe, ka ọ dị ugbu a na ụtụ isi gị yana nkwado ụmụaka, nwee nyocha nlele. Njirimara nke onye ọ bụla nwere ihe karịrị 5% nke akwụkwọ ikike ahụ. Kwaa ịkọwa ọrụ ịchọrọ ịrụ ọrụ -
Nke a bụ ebe 'Lọ ọrụ 'Illinois nke aha nha ọhaneze na ụlọ ọrụ cannabis na-egosipụta ọnụọgụ ndị steeti - Usoro ọrụ ndị ahụ ga - egosi etu ụlọ ọrụ gị ga - esi kọwaa, goro ọrụ, zụọ obere - ụmụ ntakịrị, ụmụ nwanyị, ndị agha, ndị nwere nkwarụ ma nwee usoro omume ziri ezi yana ichedo ndị ọrụ.
Ọzọkwa - ịkwesiri igosipụta ahụmịhe ma ọ bụ omume azụmahịa nke na-akwalite ike akụ na ụba na mpaghara ebe emetụtaghị ya. Maapụ ndị a nwere mmekọrịta kwekọrọ na ịda ogbenye n'obodo mepere emepe na steeti - ha na-akọwara steeti na ọnụ ọgụgụ gọọmentị dị na ntanetị na DCEO webụsaịtị. Onye anamachọkikere nwekwara 20% nke isi ihe ha dabere na ha bụ ndị chọrọ nhatanha na-elekọta mmadụ.
Mgbe ihe a bara laghachi na nitty gritty of tozuru nke infuser - ha kwesiri ikwuputa ihe omuma banyere ihe eji emechi mkpọchi ebe a ga - echekwa cannabis. Ghaghi ịkọwa ahụmịhe gị n'iji kichin azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ nyocha na-emepụta ihe mmadụ riri. Denyezie ogo ọ bụla ma ọ bụ asambodo ọ bụla na ahụmịhe dị mkpa gị na ndị otu gị nwere na azụmaahịa ndị metụtara nri a.
Mgbe ahụ ị, dị ka ndị na-akụ ọrụ ịkọwapụta ụfọdụ ọrụ gburugburu ebe obibi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji nyere aka chekwaa ike na ụlọ ọrụ gị.
Asambodo a dika ihe aka aka etinyere ya n’uzo inye ihe:
Izu ike nke ihe owuwu - yabụ ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-agaghị efu ụlọ ọrụ gị - naanị kwụsị ịnwale. Gbalia ihu ihe ichoro ime - ulo ahu di nma, echekwa, na aru oru dika igwe.
Ndokwa nke atụmatụ ọzụzụ ndị ọrụ - nweta ahụmịhe
Iwu nchekwa na idekọ ndekọ - ọkpụkpụ azụ nke ụlọ ọrụ- gbakwunyekwara elekere AV elekere iri abụọ na anọ.
Nchekwa ngwaahịa na akara njirimara - aka jide n'aka na ị nwere ike iru eru dị mfe ma kọwaa ịdọ aka ná ntị nke THC na arịa nwatakịrị.
Isi nhatanha nke ndi mmadu
(obere ihe -2% nke ya) Isi ihe ndị metụtara gburugburu, atụmatụ dịgasị iche iche, ndị Illinois na ndị agha vetiranye & nzute ndị obodo maka mmekọrịta.
Usemụaka nwere ike nwee naanị “ihe akụrụngwa” ma a bịa cannabis - nke iwu ahụ kọwara dịka ihe mmuta ha chọrọ inye ha na ngwaahịa ha.
N'ezie iwu machibidoro ndị na-enye ụmụaka ọrụ ịrụ ọrụ nke cannabis itinye uche na ifuru osisi cannabis nke na-akọwapụta onye nrụpụta na ụlọ ọrụ. (410 ILCS 705 / 35-25 (n) -
Agbanyeghị, ngalaba Ag nwere ike imepe otu ikikere iji mee mmịpụta ndị a - dịka iwu infuser na-enye ohere nke ahụ, mana ọ ga-apụ n'ọnụ ụzọ - akwụkwọ ikike ọkọlọtọ Infuser ahụ enweghị ngalaba mmịpụta - maka na ị chọrọ ikikere ọrụ aka - ya mere google na.
Mana ọ bụrụ na ịchọrọ iji THC mepụta ihe ndị dị ịtụnanya na THC tinyere ya - nwee obi ụtọ ịnweta na ịdenye aha ma ọ bụ gaa leta m na ọka iwu ụlọ ọrụ cannabis site na ịgagharị. onye ọka iwu cannabis ma ọ bụ “ikike ezighi ezi” na enwere m olile anya na mụ na gị na-anụ ụtọ Lagunitas cannabis brew site na 2022.